Mkpa: Live Email ọgụgụ isi Technology | Martech Zone
Thursday, January 21, 2016 Monday, May 16, 2022 Douglas Karr
Ụlọ ọrụ email nwere nsogbu abụọ bụ isi na ọ na-aga n'ihu na-eji ọtụtụ nzipu ozi:
Personalization - Izipu otu ozi, n’otu oge, ndị debanyere aha email gị anaghị enweta ozi ziri ezi na oge kwesịrị onye nnata. Gịnị kpatara Marianne, 24 afọ, ga-eji nweta otu onyinye ahụ Michael, 57 afọ, mgbe ha nwere mmasị na ihe dị iche iche? Dika nnata nke obula puru iche, otua ka ozi o bula kwesiri. Ozi ịntanetị nkeonwe na-ebugharị ugboro isii elu azụmahịa, mana 70% nke ụdị anaghị eji ha eme ihe MarketingLand.
ige nti – Oge bụ nsogbu ọzọ na izipu ọtụtụ mmadụ. Ọbụlagodi na ahaziri ọdịnaya nke email ahụ, a na-ezigara onye nnata ọ bụla ozi-e n'otu oge. Nke a bụ n'agbanyeghị onye ọ bụla debanyere aha nwere dị iche iche si ebi ndụ, àgwà, ma ọ bụ ọbụna oge zones. Site na izipu ya n'otu oge, ụlọ ọrụ ahụ ga-atụfu ọtụtụ ndị nwere ike nwee mmasị na onyinye ahụ mana natara ya na mpụga windo njikọ aka.
Nkwalite oge izipu nwere ike bute nkwalite 22% na ntinye aka email.
Ahịa email ka bụ ọwa kachasị amasị ndị ahịa depụtara iji nweta nkwalite site na ụdị ha masịrị ha. Ndị ụlọ ọrụ maara na ha na-eziga ọtụtụ ozi ịntanetị mana na asọmpi na igbe na-ebido ọkụ kwa ụbọchị, enweghị mkpa nke ozi ịntanetị na-emebi n'ezie nlọghachi nke ụdị azụmaahịa na-eziga ya.
Idozi Nsogbu Izi ozi Mas
Ndị na-ere ahịa anwalela ịhazi mkpọsa ahịa email ha nanị site na itinye aha mbụ nke ndị debanyere aha na ozi ahụ ma ọ bụ n'ahịrị isiokwu. Ebumnuche dị ebe a bụ ime ka onye nnata ahụ chee na edepụtarala email ma zigara ya naanị ya. Agbanyeghị, ndị nnata anaghị aghọgburu ya n'ụzọ dị mfe… ọkachasị mgbe anaghị ahaziri ọdịnaya email ahụ.
Ndị ahịa nwere ọtụtụ data na onye ọ bụla debanyere aha taa karịa ka ha nwere. O di nwute, ha amaghi otu esi eji ya eme ihe ma obu nwere akụrụngwa nke di ike iji mee ya. Ikekwe esemokwu ahụ abughi ndị na-ere ahịa, ọ bụ na e nwere naanị nyiwe ozi ịntanetị dị adị. Dị mkpa emepụtawo ihe dị ike, ma nke na-enweghị nghọta na-enye ndị ahịa ahịa ohere iji data ndị a ziga ozi ịntanetị ziri ezi, n'oge kwesịrị ekwesị, na onye ọ bụla debanyere aha.
Dị mkpa bụ teknụzụ ọgụgụ isi dị ndụ nke na-enyocha onodu nke mmeghe na omume nke onye ọ bụla natara iji nyefee ozi ahụ n'oge kachasị mma ma gosipụta ọdịnaya kachasị mkpa na ezigbo oge.
Na mmeghe ọ bụla nke email ahụ, Reelevant na-agbanwe ọdịnaya nke ozi na oge maka onye ọ bụla natara dabere na ngwaọrụ, ọnọdụ, na ihu igwe na ebe enyere na oge. Dịka ọmụmaatụ, ebe nrụọrụ weebụ e-commerce na-emepụta ejiji ga-enwe ike ịhazi mkpọsa ya iji gosipụta mmiri ozuzo na uwe ogologo ọkpa ma ọ bụrụ na mmiri na-ezo mgbe onye natara ya meghere email ahụ, na T-shirts na obere uwe ma ọ bụrụ na anwụ na-acha mgbe onye natara meghere email a ọzọ.
Reelevant na-apụta site na nzipu ozi igwe site na izipu ozi ịntanetị na-akpaghị aka n'oge dị iche iche maka onye ọ bụla debanyere aha. Iji chọpụta oge kachasị mma iji soro onye ọ bụla n'ime ha rụọ ọrụ, algorithms nke ikpo okwu na-enyocha omume na omume ha na email ọ bụla ha natara. Ka ị na-ezigakwa ozi ịntanetị, ka amachara karịa ngwa ahụ.
Tags: dọrọ na dobedọrọ na dobe onye na-ewu emailike ọdịnayaemail nkeonweemail zipu ogekeonwedị mkpaizipu ogezipu oge njikarịcha